कार्कीमाथि प्रश्नः डिएनए परीक्षणलाई नै सर्वोच्चले नमान्ने हो भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ? « Pahilo News
कार्कीमाथि प्रश्नः डिएनए परीक्षणलाई नै सर्वोच्चले नमान्ने हो भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
प्रकाशित मिति : 10 July, 2016 10:53 am
२६ असार । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्धमा परेको उजुरीबारे सुनुवाई सुरु भएको छ । कार्कीका विरुद्ध सात जनाको उजुरी परेको थियो ती मध्ये आइतबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा तीन जना उजुरीकर्ताले आफ्नो भनाई राखेका छन् । आफ्नो भनाई राख्नेहरुमा राजीव गुरुङ, तोयानाथ भट्टराई लगायत छन् ।
ती मध्ये पनि राजीवले राखेको भनाईले संसदीय सुनुवाई समितिमै नयाँ तरंग पैदा भएको छ । उनले परीक्षणको रिपोर्टलाई नै असत्य मानेर गलत फैसला गर्ने कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा न्यायको ढोका बन्द हुने जिकिर गरेका थिए ।
कार्कीले २०६७ जेठ ११ गते डिएएन रिपोर्टलाई सत्य नमानी फैसला गरेको भनी उनले कार्कीका विरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
नीता गुरुङले २०५७ सालमा छोरा जन्माएकी थिइन् । छोराको नाम रवीन थियो । नीताले राजीवको छोरा हो भनी बाबुछोराको नाता कायम गराउन मुद्दा हालेकी थिइन् । जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदै मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। सर्वोच्चको इजलासमा त्यतिबेला कार्की थिइन् ।
इजालसले दिएको आदेश अनुसार डिएनए परीक्षण पनि भयो । डिएनए परीक्षणको रिपोर्टमा राजीव र रवीनको जैविक सम्बन्ध नरहेको देखियो। तर त्यतिबेला सुशीला कार्कीसहित बलराम केसीको इजलासले डिएनए रिपोर्टमाथि नै शंकाको प्रश्न उठाउँदै राजीव र रविनलाई बाबुछोराको नाता कायम रहेको फैसला सुनायो ।
त्यसमा असहमति जनाउँदै मुद्धा दायर गरेको राजीव आइतबार सुनुवाई समितिमा उपस्थित भए । कार्कीविरुद्ध परेको उजुरी कायमै रहेका बेला कार्की प्रधान न्यायाशीस बन्ने भनेपछि राजीवले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदा आफूहरु जस्ताको न्याय नहुने भन्दै सुनुवाई समितिमा ‘डिएनए परीक्षणलाई नै सर्वोच्चले नमान्ने हो भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ? म न्याय माग्न कहाँ जाऔँ ?’ निकै भाबुक हुँदै उनले त्यो प्रश्न गरेपछि समितिका सबै सदस्य मौन रहे । बैठक एक घण्टाका लागि स्थगन भएको छ । कार्कीकै उपस्थितिमा राजीवले राखेको प्रश्नको सवाल जवाफ हुने छ । त्यतिबेला कार्कीले के उत्तर दिने हुन् प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।